Ciidamada Koonfur Galbeed oo Hub Kasoo Furtay Dagaalyahanno Katirsan Al Shabaab (SAWIRRO) - Hablaha Media Network
Ciidamada Koonfur Galbeed oo Hub Kasoo Furtay Dagaalyahanno Katirsan Al Shabaab (SAWIRRO)
HMN:- Ciidamada booliska ee sida gaarka ah u tababaran ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen waxa ay ku dileen dagaalyahanno ka tirsan Ururka Al Shabaab, kadib markii ciidamada ay heleen macluumaadka ku saabsan deegaano ay soo galeen ragaasi.
Howlgalkan ayaa wuxuu ka dhacay inta u dhaxeysa Deeganada Saydheelow iyo Labaatan Jirow oo ka tirsan Gobolka Baay, sida uu sheegay Taliye ku xigeenka ciidanka Booliska gaarka ah ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Ciidamada Koonfur Galbeed oo Hub Kasoo Furtay Al Shabaab 4
Ciidamada ayaa jidka u galay raggan Shabaabka ka tirsanaa oo saaranaa mooto, waxaana saddexdii nin ee Shabaabka ahaa lagu dilay Howlgalkaasi.
Ciidamada Booliska ee sida gaarka ah u tababran ee Koonfur Galbeed ayaa Magaalada Baydhabo waxa ay ku soo bandhigeen saddex 5-qori oo AK-47 ah oo ay wateen ragga Shabaabka ah ee la dilay.
Taliye ku xigeenka ciidanka Booliska gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ragga la dilay meydkooda looga soo tagay goobtii lagu dilay, wuxuuna ku hanjabay inay beegsan doonaan dagaalyahanadda Al Shabaab meel kasta oo ay joogaan.